Indlela Yokufumana Ilungelo Olufanelekileyo kwiiNtshontsho zeebhola kunye neenqunu
Iinyawo zakho ziya kukubulela
Kukunzima ukuba ungene kwisitokisi sokhuni rhoqo xa u tyelela icandelo lesigqabi kwisitorethi sezinto zemidlalo. Kwenene? Bafuna ngaphezu kweedola ezili-100 ngeenqanawa ezithengiweyo ngenjongo ecacileyo yokuyisebenzisa kakubi kwaze kwaba yilapho iwahlukana. Ngakolunye uhlangothi, izicathulo zakho zokuhamba okanye iibhuthi ziya kuba sisiseko samava akho kwindlela. Awukwazi ukufika ngaphandle kwabo, kwaye umbini odibeneyo uya kukugxotha kwiintlungu.
Ngamanye amazwi, iibhoti ezihamba ngeendleko ezixabisekileyo zixabisa iindleko- ukuba ziphila ngokuvumelana nezithembiso zabo. Umgangatho wokuhamba ngeenyawo unqabile ngokwaneleyo ukukhusela iinyawo zakho njengoko uhamba ngeekhilomitha, ucebile ngokwaneleyo ukuba unokuziva uxhumano lwakho kwindlela, kwaye ukhululekile ngokwaneleyo ukuba - ukuba ubukhulu becala kwaye bugqatswe ngeesokisi ezifanelekileyo - ukuba kunokwenzeka, kufuneka uhlangabezane ne-blisters, izibophezelo ezinobungozi okanye amabala obuhlungu kwiinyawo zakho.
Iindaba ezimbi kukuba, nangona kunjalo ndiyintanda yam intandokazi, akukho mpendulo enye ye-cookie-cutter apho iindawo zokuhamba ngeebhatshi zihamba phambili.
Iingcebiso zokuthenga iinqwelo zeebhola kunye neenqunu
Endaweni yoko, sebenzisa la maqhinga ukukunceda ukuba ulinganise kakuhle indlela zonke iindawo zokuhamba ngeenyawo okanye umtshwenyeko ozama ukuzenza. Ngaphambi kokuba uhambe, gcina oku kulandelayo engqondweni:
Hamba ukuyothenga ngasekupheleni kosuku, xa iinyawo zakho zisezona zikhulu.
Gqoka iisokisi ezifanayo kunye neengxubane ozigqoka kuzo ukuhamba. Ukuba ulindele ukugqoka uluhlu olubanzi lweesokisi - zithi, iisokisi ezincinci zokunyuka kwehlobo kunye neesokisi ezinamaqabunga obuchopho obusika - ukuzisa iisokisi ezinqabileyo kunye nezithinest nawe.
Cela umthengisi okanye umthengisi ukuba alinganise zombini iinyawo zakho. Oku kuya kukunika iqalo lokuqala lobukhulu bobukhulu, kwaye kuya kukuxelela ukuba unyawo olunye lukhulu kunomnye.
Lace up iibhothi zombini, vuka uphinde uzigubungele iinzwane zakho. Iinzwane zakho ezinkulu kufuneka zibe kufuphi, kodwa kungachukumisi, phambi kwebhokisi le toe. Cela umsizi ukuba acindezele sakhe okanye isithupha sakhe phantsi kwephambili kwibhotshi, nje phambi kwezandla zakho ezinzwane. Njengomgaqo oqhelekileyo, ukuba kukho i-thumb-width egcweleyo yendawo phakathi kwezandla zakho ezinkulu kunye nephambili kwebhokisi le toebho, iibhuthi zikhulu kakhulu. (Khumbula, oku kucinga ukuba usuvele ugqoke iisokisi zakho zokuhamba-kuquka nezitshixo ezinobunzima, ubusika ukuba uceba ukuzisebenzisa.) Kwakhona, ukunyuka kwesisindo (kwaye ke kulula ukuguquguquka) izicathulo, kusondele ngakumbi no kuphuma.
Qhubela phambili kwizwane zakho, uze ubuyele kwizithende zakho. Yenza oku maxesha ambalwa. Ukuba iibhothi zilungele kakuhle, izithende zakho aziyi kunyuka kwaye zingaphantsi ngaphakathi kwebhokisi. Ingakumbi izithende zakho zihamba, kunokwenzeka ukuba ufumane i-blisters xa usebenzisa ezo zibhokisi.
Hamba ukhuphuke uze ukhuphuke. Ukuba iibhothi zilungele kakuhle, iinyawo zakho ziya kuhlala zikhuselekile; Ukuba azinakulungile, izithende zakho ziya kuhamba ngebhokisi njengoko uhamba ephakamileyo, kwaye iinzwane zakho ziya kutshintsha phambili kumgca webhokisi le toebho xa uhla. *
Thatha uhamba ngeenxa yokugcina isantya. Ukuba isitoreli sinika irampu ethe tye okanye i-chunk yedwala ungahamba kunye nokuhla, uyisebenzise. Ukuba uvakalelwa nayiphi na iipenki, i-pokes, i-rubs, okanye "amabala atshisayo" ekungqubuzaneni naphi na kwi-boot, akuzona izihlangu ezifanelekileyo kwiintetho zakho zokuhamba.
Musa ukuvumela umntu ukuba akuqinisekise ukuba iindawo eziyingxaki ziya kuhamba njengoko i-boot iqhekeza. Iibhotshi ezinzima kakhulu zinokutshintsha kwaye zifake kwiinyawo zakho ngendlela ethile , kodwa zifanele zilungele kakuhle (kwaye zifaneleke ngokufanelekileyo) ukusuka ekufumaneni -go. Enye enye ikhefu lesikhumba kwiibhotile zesikhumba, eziza kuthotywa rhoqo kunye nokusetyenziswa. Izicathulo ezinqabileyo kunye nezicathulo zokuhamba kufuneka zincinci kwixesha.
Ngaba Unenkathazo Ukufumana Izibhoto Neenqatyana Ezifanelekileyo?
Zama ezi ngcebiso:
Zama kwizicathulo zabantu (ukuba ungumfazi) kunye nezicathulo zabasetyhini (ukuba ungumntu). Azikho zonke iinkampani ezakha izicathulo zazo kwixesha elithile lezesini kodwa, ukuba zenzayo, ezo ntlukwano ezincinci zingabakho konke okufunekayo ukufumana ukulungelelanisa.
Cela ububanzi (okanye ubuncinci) ububanzi. Ukuba iibhuthi ozama ukuzenza zingangeni okanye zincinci ngokwaneleyo, zama ibini elinikeza ububanzi obuninzi ukukhetha kuyo.
Ukuba unamanqina amancinci, zama ezibhotsheni zezingane kunye nezicathulo. Ibhonasi: Zihlala zibiza kakhulu kunezihlangu ezikhulile. Umntu ongaphantsi: Iingubo zezingane ezingenakwakhiwa ukuze zinyamezele ukuxhaphazwa kakubi njengeebhotile ezenzelwe abantu abadala.
Shintsha iisokisi zakho. Iingxowa ezitshiyelweyo (ezikhoyo kwiindawo ezininzi zezemidlalo) zinganciphisa ukuxubha kunye nokungahambi kakuhle ezinzwaneni zakho nasezinqeni.
Indlela yokwenza i-Pee Ngethuba lohambo
12 Iifayile zeStephen King Horror ezihle kakhulu (kunye ne-Bonus Guilty Pleasure)
Impembelelo yeCaffeine ekuculeni
Ungayifundisa Njani Ngokukhawuleza Umntwana Ukuba Ahambe?
Ukuguqulwa kweMbala Yamehlo
Ngaba I-Politics Yayifumana I-Space Race?
Uluhlu olupheleleyo lwe-10 Classic Latin Boleros
Yintoni i-Grass Skiing?
I-Alberta, iCanada yeVital Records
Isingeniso kwiMveli yobuGcisa
Yenza Iimpahla Zakho Zomtya-I-Band-Study Unit
Isibhedlele Isihlandlo seBream
Ukubuza imibuzo ngesiSpanish
Imfazwe ye-Worlds Radio Broadcast ibangela i-Panic